वडा अध्यक्ष अमृत थापा , नेपाल प्रहरी सहितको टिम मनमैजु पुलमा , लकडाउनमा थप कडाई – SajhaPana
वडा अध्यक्ष अमृत थापा , नेपाल प्रहरी सहितको टिम मनमैजु पुलमा , लकडाउनमा थप कडाई
साझा पाना २०७७ वैशाख ४ गते १३:१६ मा प्रकाशित
४ वैशाख, काठमाडौं । तारकेश्वर नगरपालिकाले आजदेखि नगरभित्र लकडाउन थप कडा पार्न सबै वडाहरुलाई निर्देशन जारी गरेको छ । नगरको निर्देशनलाई पूर्ण रुपमा पालना गर्दै तारकेश्वर वडा नं. १० ले दिनको २ घण्टामात्र खाद्यान्न पसल खोल्न दिने निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न वडा कार्यालय खटिएको छ । तारकेश्वर वडा नं. १० टोखा नगरपालिकाको मुख्य नाका सँग जोडिएको क्षेत्र हो ।
मनमैजु पुलमा वडा अध्यक्ष अमृत थापा सहित ऐश्वर्य समाजका अध्यक्ष सुर्य गेलान मगर र नेपाल प्रहरि सहितको टिमले पहरा दिइराखेको छ ।
थापाले वडाभित्रका सक्रिय टोल सुधार समितिहरु, सामाजिक अभियान्ताहरु, नागरिक समाज र आमा समूहका प्रतिनिधिहरुलाई विभिन्न आर्क बनाएर त्यसको जिम्मा लगाएका छन् । मालपोत आर्कमा सिपि मल्लसहितको टोली खटिएको छ भने लोकतान्त्रिक चोकको आर्कमा ऋषि लोहनीको नेतृत्वमा र छन्त्याल चोकमा होमबहादुर बोगटीको नेतृत्वको टिम खटिएको छ । शुभकामना चोकमा किशोर खड्कासहितको टोली खटिएको छ ।
लाखे टोल र घले पुलमा इन्द्र गुरुङ र शिव नगरका टोल सुधार समितिका सदस्यहरु सहितको टिम खटिएको छ । नासाल चोकमा अमर महर्जन र वडा नं. १० का वडा सदस्य श्याम महर्जन र नापी चोकमा विनोद शर्मा र सरिस मर्हजन लगायतको टिम । हिलेटोल हाइटमा सागर कार्की, केशव बोगटी सहितको टिमले वडा नं. १० लाई सुरक्षित राख्न टिम परिचालन गरिएको कुरा वडा अध्यक्ष अमृत थापाले बताएका छन् ।
ट्याग : #वडा अध्यक्ष अमृत थापा